Jikelele Jikelele uSamuel Crawford kwiMfazwe yaseMelika
USamuel Crawford - Ubomi bokuqala kunye noMsebenzi:
USamuel Wylie Crawford wazalwa ngoNovemba 8, 1827, endlwini yakhe, u-Allandale, e-Franklin County, PA. Ukufumana imfundo yakhe yokuqala kwendawo, wangena kwiYunivesithi yasePennsylvania eneminyaka elishumi elinesine. Ukugqiba izifundo ngo-1846, uCrawford wayefuna ukuhlala esikhungweni kwisikolo sezonyango kodwa wayebonakala encinci kakhulu. Ukuqalisa kwi-degree of master, wabhala i-thesis kwi-anatomy ngaphambi kokuba avunyelwe ukuba aqale izifundo zakhe zonyango.
Ukufumana i-degree yezokwelapha ngoMatshi 28, 1850, uCrawford wakhetha ukungena kwi-Army yase-US njengogqirha onyakeni olandelayo. Ukufaka isicelo sokuba ngumsizi wonyango oncedisayo, wafumana amanqaku okubhalwa kweso sifundo.
Kule minyaka elishumi ezayo, uCrawford wadlulela kwiinkalo ezahlukeneyo kumda kwaye waqalisa ukufundelwa kwezesayensi zemvelo. Ukuphishekela lo mdla, wangenisa amaphepha kwi-Smithsonian Institution kunye nokubandakanya iindawo zoluntu kwamanye amazwe. Walawulwa kuCharleston, SC ngoSeptemba 1860, uCrawford wakhonza njengogqirha we-Forts Moultrie kunye neSomter. Kule nxaxheba, wanyamezela ibhobholo yeS Fort Sumter ebonisa ukuqala kweMfazwe yombutho ngo-Apreli 1861. Nangona igosa lezempilo le-fort, uCrawford wayejongene nebhethri yezibhamu ngexesha lokulwa. Ekhusele eNew York, wafuna ukuguqulwa komsebenzi kwinyanga elandelayo kwaye wathola ikhomishini enkulu kwi-13 ye-US Infantry.
USamuel Crawford - Imfazwe yasekuqaleni:
Kule nxaxheba ehlobo, uCrawford waba ngumgadi-ncedisi umhloli jikelele kwiSebe lase-Ohio ngoSeptemba. Ngentwasahlobo elandelayo, wathola ukunyuswa kwi-brigadier jikelele ngo-Ephreli 25 kunye nomyalelo wesigqeba saseShenandoah Valley. Ukukhonza kwi- General General Nathaniel Banks 'II Corps of Army yaseVirginia, uCrawford wabona kuqala ukulwa kwiMfazwe yaseCedar kwi-Agasti 9.
Kwindlela yokulwa, i-brigade yakhe yahlaselwa ngokutshabalalisa okwaphazamisa i-Confederate eyashiya. Nangona ukuphumelela, ukuhluleka kweBhanki ukuxhatshaza imeko iphoqa uCrawford ukuba ahoxise emva kokulahlekelwa yintlungu enkulu. Ukubuyela kwisenzo ngoSeptemba, wahola amadoda akhe entsimini kwi- Battle of Antietam . Ejongene nenxalenye esemantla yemfazwe, uCrawford wenyuka waya kumyalelo wecandelo ngenxa yokubulawa kweXII Corps. Lo msebenzi wabonakala ngokufutshane njengoko wayenxeba elangeni elilungileyo. Ukuqhawula ukusuka ekulahlekelweni kwegazi, iCrawford ithathwe kwintsimi.
USamuel Crawford - iPennsylvania Reserves:
Ukubuyela ePennsylvania, uCrawford wabuyela kwindlu kayise kufuphi neChambersburg. Ukubethelwa yimingcele, isilonda sathatha iinyanga ezilisibhozo ukuphilisa ngokufanelekileyo. Ngomhla ka-Meyi 1863, uCrawford waphinde waqala ukusebenza kwaye wathatha umyalelo weCandelo lePennsylvania Reserve kwi-Washington, DC. Esi sithuba sasibe sagcinwe ngabaphathi abaziintloko uJohn F. Reynolds noGeorge G. Meade . Inyanga kamva, ukwahlula kwongezwa kuMagosa Jikelele uGeorge Sykes 'V Corps kwi-Army Meade yasePomomac. Ukukhangela ngasenyakatho ngamabhinqa amabini, amadoda akwaCrawford ajoyina ukuphinda i- General Robert E. Lee yaseNyakatho Virginia.
Emva kokufikelela emngceleni wasePennsylvania, uCrawford wagqiba isahlulo waza wanika inkulumo evuselelayo ecela amadoda akhe ukukhusela ilizwe labo.
Ukufika kwiMfazwe yaseGettysburg malunga no-2 ngoJulayi 2, i-Pennsylvania Reserves yayimisa okwesikhashana ukuphefumula emfutshane kufuphi ne-Power's Hill. Nge-4: 00 ntambama, uCrawford wathola umyalelo wokuthabatha amadoda akhe asezantsi ukuze ancede ekunqandeni ukuhlaselwa kukaLieutenant General James Longstreet . Ukuphuma, amaSykes asusile esinye isigidimi kwaye wayithumela ukuxhasa umgca kwi-Little Round Top. Ukufikelela kwinqanaba elingasenyakatho kwelo nduli kunye nesigqeba sakhe esisele, uCrawford wamisa njengamajoni aseManyano aqhutywa kwiNgqungquthela yaseGroatfield abuyele emigqeni yakhe. Ngenkxaso evela kuColonel David J. Nevin we-VI Corps, uGrawford wahoxisa i-Plum Run kwaye wayibuyisela i-Confederates ezayo.
Ngethuba lokuhlaselwa, wabamba imibala yecandelo kwaye yena ngokwakhe wabakhokela amadoda. Ukuphumelela ekunqumeni ukuqhubela phambili kwe-Confederate, iinzame zeqebana zanyanzelisa intshaba ngaphaya kweGroatfield ubusuku.
USamuel Crawford - Uphulo lwe-Overland:
Kwiiveki emva kwemfazwe, uCrawford wayephoqelelwe ukuba athathe ikhefu ngenxa yemicimbi enxulumene ne-Antietam yecala kunye ne-malaria ayeyithengile ngexesha lakhe eCharleston. Ukuqalisa umyalelo weqela lakhe ngoNovemba, wahokela ngexesha le- Mine Run Run Campaign . Ukuphulukana nokulungiswa kwakhona kweMikhosi yasePomomac kwintwasahlobo elandelayo, uCrawford wagcina umyalelo wecandelo lakhe eliye lasebenza kwi- Major Cornelius K. Warren kaVorps. Ngaloo nxaxheba, wathatha inxaxheba kwiLieutenant General u-Ulysses S. Grant kwi-Overland Campaign ngoMeyi ebone amadoda akhe asebenzisana ne- Wilderness , iSpotsylvania House House kunye neTotopotomoy Creek. Emva kokuphelelwa kwenani lala madoda, uPrawford washukunyiswa ukuba aqhube isahluko esahlukileyo kwi-Corps ngoJuni 2.
Kwiveki kamva, uCrawford wathatha inxaxheba ekuqaleni kweNkqantosi yasePetersburg kwaye ngo-Agasti wabona izenzo kwi- Globe Tavern apho wayenxeba khona esifubeni. Ukufumana kwakhona, uqhubeka esebenza malunga nePetersburg ngokuwa kwaye wafumana ukuphakanyiswa kwe-brevet kwi-General General ngoDisemba. Ngo-Epreli 1, isahluko sikaCrawford sathutha kunye ne-Corps kunye nebutho lamashishini eManyano ukuhlasela amabutho e-Confederate kwii-Forks ezinhlanu phantsi komyalelo jikelele we- General General Philip Sheridan .
Ngenxa yeengcaphephe ezingenangqondo, ekugqibeleni yayilahlekile imigca ye-Confederate, kodwa kamva yadlala indima kwiNtshontsho.
USamuel Crawford - Kamva umsebenzi:
Ngokuwa kwe-Confederate isikhundla ePetersburg ngosuku olulandelayo, amadoda akwaCrawford athatha inxaxheba kwi-Appomattox Campaign eyayibonayo ibutho leManyano liqhuba umkhosi kaLee entshonalanga. Ngomhla ka-Apreli 9, i-Corps ixhaswe ekuxhaseni kwiintshaba kwi-House yase-Appomattox iNkundla eyenza uLee anike umkhosi wakhe . Ekupheleni kwemfazwe, uCrawford waya eCharleston apho wayenxaxheba khona kwimibhiyozo eyabona ifulegi yaseMelika iphinda iphakanyiswe ngaphezu kwe-Fort Sumter. Ukuhlala emkhosini iminyaka emibhozo, wahlala umhlala-phantsi ngoFebruwari 19, 1873 kunye ne-brigadier jikelele. Kwiminyaka emva kwemfazwe, uCrawford wafumana inkokheli yezinye iinkokheli zeMfazwe yezoLuntu ngokuzama ngokuphindaphindiweyo ukubiza ukuba imizamo yakhe e-Gettysburg igcine i-Little Round Top kwaye yayisisiseko sokunqoba kwe-Union.
Ukuhamba ngokubanzi ngexesha lakhe lomhlalaphantsi, uCrawford wasebenza nokugcina umhlaba eGettysburg. Le migudu yabona uthenge umhlaba kunye nePlum Run ngaphaya kweyiphi iqela lakhe elihlawulwe. Ngomnyaka we-1887, wakhupha iGenesis yeMfazwe yombutho: Ibali le-Sumter, i-1860-1861 ecacisa iziganeko ezikhokelela kwimfazwe kwaye yaba ngumphumo weminyaka elishumi elinesibini yophando. UCrawford wafa ngoNovemba 3, 1892 eFiladelphia waza wangcwatyelwa eMangcwabeni eCelrel Hill.
I-Gettysburg: I-General General uSamuel Crawford
Amagosa angamaTywala: I-General General uSamuel Crawford
Fumana i-Graves: I-General General uSamuel Crawford
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseFredericksburg
Imfazwe YaseMelika: Imfazwe yaseJonesboro (Jonesborough)
Impembelelo yoNyuka kuMvuzo oNcinane
Ukwenza ingqiqo yecuba ye-cigar